Bit By Bit - Ethics - 6.4.3 Justice
Justice ndiye pamusoro nechokwadi kuti njodzi uye zvakanakira kutsvakurudza vari zvakaenzana.
Bhuku reBelmont rinotaura kuti mutemo weRuramisiro unotarisa kugoverwa kwemitoro uye kubatsira kwekutsvakurudza. Ikozvino, hazvifaniri kunge zvakadaro kuti boka rimwe chete munharaunda rinotakura zvinodhaka zvekutsvakurudza apo rimwe boka rinowanha zvarinobatsira. Somuenzaniso, muzana remakore gumi nemapfumbamwe nekutanga remakore makumi maviri nematatu, mitoro yekushanda senyaya dzekutsvakurudza mune zvekurapa dzakawira zvikuru kune varombo, asi kubatsirwa kwekurasikirwa kweutano kwakaenderera zvikuru kune vapfumi.
Mukuita, chirevo cheRuramisiro chakatanga kududzirwa kureva kuti vanhu vanotambura vanofanira kuchengetedzwa kubva kuvatsvakurudzi. Mune mamwe mazwi, vatsvakurudzi havafaniri kubvumirwa kuti vaite chido kune vasina simba. Icho chiitiko chinotambudza icho munguva yakapfuura, nhamba yakawanda yezvidzidzo zvakashata zvinokonzerwa nehutano inobatanidza vatori vechikamu zvakanyanya kutambura, kusanganisira vanhu vasina kudzidza uye vasina kudzivirirwa (Jones 1993) ; vasungwa (Spitz 2005) ; masangano, makumbo akaremara vana (Robinson and Unruh 2008) ; uye varwere uye vakwegura uye vanokonzerwa nechipatara varwere (Arras 2008) .
Munenge muna 1990, zvisinei, maonero ehutongi akatanga kutamba kubva pakudzivirirwa kusvika pakuwana (Mastroianni and Kahn 2001) . Semuenzaniso, vashanduri vakatsigira kuti vana, vakadzi, uye madzinza maduku zvakada kuiswa pachena mumatambudziko ekurapa kuitira kuti mapoka aya awane ruzivo kubva kune zivo yakawanikwa kubva mumatambudziko aya (Epstein 2009) .
Mukuwedzera kumibvunzo pamusoro pekudzivirirwa uye kugona, mutemo weRuramisiro unowanzotsanangurwa kuti upiwe mibvunzo pamusoro pekodzero yakakodzera yevatori vechikamu-mibvunzo iyo iri pasi pekukakavadzana kwakasimba mumitemo yezvokurapa (Dickert and Grady 2008) .
Kushandisa chirevo cheRuramisiro mienzaniso yedu mitatu inopa imwe nzira yekuvatarisa. Mune chimwe chezvidzidzo vaiti vatori vechikamu vaibhadhara mari. Zvakare zvinomutsa mibvunzo yakaoma zvikuru pamusoro pehutongi hweHurumende. Kunyange zvazvo nheyo yeBénéficence inogona kuratidza kusabvisa vatori venyika kubva kune hurumende dzinodzvinyirira, nheyo yeHurumende inogona kurongedza kubvumira vanhu ava kuti vabatanidzwe-uye vabatsire kubva kune-zvakaenzana zviyero zvekutsvaga paIndaneti. Nyaya yeKunakidza, Zvisungo, uye Nguva zvakare inomutsa mibvunzo nokuti boka rimwe revadzidzi rakatakura mitoro yekutsvakurudza uye chete sangano sezvo vose vakabatsirwa. Pakupedzisira, mukutapukira kwepfungwa, vatori vechikoro vakatakura mutoro wekutsvakurudza vaiva sarudzo dzisina kunaka kubva kuvanhu vanogona kubatsirwa nemigumisiro (kureva, Facebook vanoshandisa). Nenzira iyi, chimiro cheKutapukisa kweEmotional kwakanyatsopindirana nemutemo weHurumende.